China Ingxelo ngombane oMncinci osebenza ngombane FD5-DW mveliso kunye nabenzi | Ukuhlanjululwa
Umahluko phakathi kwe-FD5 kunye ne-FD5-DW Linear Actuator ngumsebenzi wempendulo ye-potentiometer. Ingxelo ye-potentiometer eyakhelweyo ivumela ulawulo lwendawo. Eli nqaku libalulekile kwizicelo ezifuna ukuchaneka. Isetyenziswa ngokubanzi kumatshini wokuzenzekelayo wasekhaya, kwikhabhathi, kwezolimo nakwimizi-mveliso.
900N (Push) / 750N (Tsala)
Ngaba unokunika ingxelo ngokuma kwesibetho ngokuthe ngqo
Isinxibelelanisi esingasemva senziwe kunye netyala, umngxunya wokunyuka ujongeke kumatshini. Eli candelo lenziwe nge-alloy zinc.
Lo ngumahluko phakathi kwe-FD5 kunye ne-FD5-DW actuator, njenge-actuator ye-FD5-DW enomsebenzi we-potentiometer, eli candelo likhulu kakhulu.
Ngaba uyayamkela isampulu yoku-odola le mveliso?
Ewe, isampulu yoku-odola yamkelwe.
2.Are umenzi okanye urhwebo inkampani?
Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava obuchule njengomenzi.
3.Yintoni indlela yakho yokuhlawula?
T / T, Western Union, PayPal, Alibaba (i-inshurensi yorhwebo).
4.Uya kuyithumela ixesha elingakanani impahla emva kokubeka iodolo?
Ngokubanzi, imalunga neentsuku ezingama-4-5 zomsebenzi zeesampulu, iintsuku zokusebenza ezili-10 ukuya kwezi-20 kwii-odolo ezinkulu.
Kuxhomekeke kubungakanani oda yakho.
Egqithileyo Umatshini oMncinci oMiselweyo we-FD5
Okulandelayo: Umsebenzi onzima we-Actuator Linear FD6
Umatshini wokuhambisa umbane omncinci, Isantya esiphezulu seLine Actuator, Ulawulo lweBhedi yoMbane, Ulawulo lwe-Wireless Remote lweSibhedlele, Ulawulo lweBhedi yonyango kude, Ulawulo lweBhedi yasesibhedlele,